Palpalkokhabar.com | पाँच वर्षीया सुप्रिनाले यसरी गाइन आँखा रसाउने आफ्नै पिडाको गीत
पाँच वर्षीया सुप्रिनाले यसरी गाइन आँखा रसाउने आफ्नै पिडाको गीत
Posted on: October 20, 2016 | views: 630
काठमाडौं । उमेरले साँढे पाँच वर्ष पुरा भई ६ तर्फ लम्किँदै छिन् सुप्रिना कार्की । मण्टेश्वरीको सिनियर किन्नर गार्टन अर्थात (एसकेजी) नवनीत टोडलर्स जोन कुलेश्वरमा पढ्दै छिन् । उनका आमा–बाबा (शुभाश र सुनिता) ६ महिना अघि मात्र एक्ली छोरी सुप्रिनालाई ठुलोममी–ठुलोबाबाको साथमा छाडेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
सुप्रिनाको लालन–पालन, शिक्षा–दिक्षा, इच्छा–आकांक्षाको परिपुर्तिमा उनका ठुलोममी, ठुलोबाबाले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनी खुशीका साथ खेल्दै रमाउँदै हुर्किँदै छिन् । साँझ विहान आमा बाबासंग प्रविधिको उपहार भाइवर, स्काइप र फेसबुकका भिडियो च्याटमा पनि कुराकानी गर्छिन, चुम्बन गर्छिन्, माया, खुशी र दुःख दर्शाउँछिन् । तर पनि स्वभावैले बालसुलव÷बाल मनोविज्ञानले आमा–बाबाको काखको खोजी त गर्छ नै ! यस्तै आमाबाबाको काखमा बसेर खेल्ने, संगै हुने, चाड पर्वमा आमा–बाबाको हात समाउँदै नयाँ नाना लगाएर मामाघर जाने रहर सुप्रिनालाई नहुने कुरै आउँदैन, जुन ठुला भैसकेकाले त त्यो बाला पन बिर्सन सकेको हुँदैनन् ।
पढाईमा तिक्ष्ण उनी स्कुलका अतिरिक्त कृयाकलापमा झनै तिक्ष्ण छिन् । उनको स्कुलले पनि मस्ट ट्यालेण्टेड स्टुडेन्ट घोषणा गरेको छ । प्रि अन्तर विद्यालय स्तरिय गायन प्रतियोगितामा पनि सुप्रिनाले स्कुलको इज्जत बढाएकी छिन् स्वर्ण पदक ल्याएर । उनको सबै रिजल्ट ‘ए प्लस’ आएका छन् । सुप्रिनाको यो प्रतिभा देखेर उनका स्कुलका शिक्षक, शिक्षिका पनि खुशी र उत्साहित छन् । हालै भएको अन्तर विद्यालय स्तरिय प्रतियोगितामा समेत उत्कृष्ट भए पछि स्कुलले सुप्रिनाको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने निचोडमा पुग्यो र उनका बाबा शुभाशको सम्पर्क पुग्यो ।
आँशु झारी बस्दै छु म यहाँ घरैमा ....
जुन गीत एक साता भित्र रचना, संगीत र रेकर्डिङ सकेर कभर भिडियो छायाँकन समेत पुरा भएर तीन दिन अघि मात्र युटुवमा राखिएको छ । सुप्रिनाको जीवन कहानी भए पनि आफ्नो र बालबालिकाको उज्वल भविष्य बनाउने सपना बोकेर संसारका विभिन्न कुना काप्चामा पुगेका लाखौं नेपालीको बास्तविक कहानी मेल खान्छ । लाखौं बालबालिकाको कहानी सफल सुप्रिना युटुवमा अत्याधिक डाउनलोड भएको गीतको रेकर्ड कायम गरेको छ । सुप्रिना आफैले मोडलिङ गरेको गीत सुन्दा र भिडियो हेर्दा जो सुकैको मन भक्कानिएर आउँछ । धरैका आँखा रसाउँछन् अझ आफ्ना बालबालिका परिवारको साथ छाडेर प्रदेशमा पसिना बगाउँदै गरेकाले त कसरी थामुन र मन !
हेर्नुहोस सुप्रिनाको स्वर र अभिनय, केडी राईको रचना, मोहन मगरको संगीत र श्री रचनाको निर्देशनमा विश्व मिडियाले बजारमा ल्याएको बालगीत । आमा बाबाकै प्रेरणाले ...
एक निजी बैंकका जागिरे सुप्रिनाका बाबा शुभास कार्की आफ्ना वरपर कुनै सांगितिक कार्यक्रम हुँदा स्टेजमा पुगेर गाउन रुचाउँछे । प्रतिष्ठित गायकका गीतहरु ट्रयाक म्युजिकमा गाउन रुचाउने शुभासले छोरीलाई पनि गाउन लगाउँथे । पढाईमा तिक्ष्ण छोरीलाई युटुवमा साना बालबालिकाले गाएका बालगितहरु देखाउने र यस्तै गर्न लगाउँथे । सुप्रिना एक पटक सुनेको शब्द टपक्कै टिपेर गाउन सक्थिन् । आमा बाबाले छोरीलाई फुक्र्याएर खुशी साट्न उकास्थे । आज उनै छोरीले गीत गाए पछि हर्ष विभोर भएका छन् । आफ्नी छोरीसंग टाढा बस्नु पर्दाको पिडा, आफ्नै कहानीमा गाएको तिखो स्वरले चसक्क मन दुखाउँछ तर छोरीले जुन प्रगति गरेर देखाइन हामी पनि यहाँ खुशीले गद् गद छौं अष्ट्रेलियाबाट शुभाशले भने अव हामी हाँस्ने, हाम्रै जस्तो कहानी भएका अरुलाई रुवाउने ...